ကလေးများ ဖုန်း..Tablet တီဗွီ စွဲလမ်းမှု အန္တရာယ်ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ | OnDoctor
By Wai Yan Lin	 On Jan 23, 2020 Last updated Feb 27, 2020
ခုခေတ်မှာ ကုန်ကျစရိတ်တွေ အသုံးစရိတ်တွေ မြင့်တက်လာနေတာနဲ့အမျှ တစ်ဖက်မှာလည်း အလုပ်အချိန်ပြည့်လုပ်နေရတဲ့ working mom တွေdad တွေ တိုးလာတော့ မိမိသားသမီးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အချိန်ပေးတာ နည်းလာပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ကလေးလေးတွေ ဂျီကျရင် အားရုံပြောင်းဖို့အတွက် အလွယ်တကူ အကူညီပေးတဲ့ ဖုန်း၊ TV ၊ ကွန်ပျူတာကို ပြပြီး အာရုံပြောင်းစေတယ်။
ကလေးငယ်များ TV ကြည့်ရင် မျက်စိပျက်မယ်၊ game ဆော့ရင် ဦးနှောက် အလုံး ဖြစ်မယ်၊ ဖုန်းနားနေရင် ဉာဏ်ရည် ထိမယ်စသည်ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောတာကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါတွေက သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေ အထောက်အထားရှိတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အယူဆတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
screen time လွန်ကဲခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ ?
screen time လွန်ကဲလာရင်
ကိုယ်ခန္ဓာ လှုပ်ရှားမှု လျော့နည်းခြင်း
ကြွက်သားနှင့် အရိုးသန်မာမှု လျော့နည်းခြင်း
အစားအသောက်ကို စိတ်ဝင်စားမှု နည်းခြင်းကြောင့် အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း
စတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်သလို screen time ကို တလွဲသုံးခြင်းကြောင့်
အရွယ်နှင့် မအပ်စပ်သော လုပ်ရပ်များကို အတုခိုးခြင်း
စိတ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း အစရှိတဲ့ လူမှုရေးပြဿနာများပါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကလေးလေးတွေ ဖုန်းစွဲနေတာ၊ TV စွဲနေတာ၊ screen time လျော့နည်းအောင် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါနော်။
ကလေးလေးတွေ အနီးကပ်ဆုံး သင်ယူလေ့လာနေရတာက မိဘတွေပါ။
မေမေနှင့် ဖေဖေက ဖုန်းကို မကြာခဏ ပွတ်နေတယ်။ Facebook သုံးသည်၊ ဂိမ်းဆော့တယ်၊ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်တယ်၊ မိသားစုဝင်ချင်း စကားပြောရင်တောင် မျက်နှာမကြည့်နိုင်ပဲ ဖုန်းကို ကြည့်ပြီးပြောကြတယ်။ Quality time မရှိဘူး။ဒီတော့ ဖုန်းတချိန်လုံးသုံးတာကို လက်ခံရမဲ့ အတုယူရမဲ့ အလုပ်ဆိုပြီး ကလေးက အမြင်မှတဆင့် ခေါင်းထဲမှာ ယူဆသွားပါတယ်ရှင်။
“ကျမကလေးက iPad ပြမှ ထမင်းစားတယ်၊ အိမ်က သားက ဂိမ်းစွဲနေတယ်၊ ဖုန်းထဲက ကာတွန်းဖွင့်ပြမှ သမီးကအိပ်တယ် ” ဆိုတာ ဂုဏ်ယူပြီး ပြောရမဲ့ စကား မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ ကလေးများကို အကျင့်လုပ်ပေးတာက မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။
ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတွင်ကျယ်ဆုံး social media က Facebook ဆိုတော့ တစ်ချို့ဆိုရင် ကလေးမွေးတာနှင့်ကလေး အမည်နှင့် Facebook account တောင် ဖွင့်ပေးလိုက်ကြပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ကလေးကို ဖုန်းမစွဲစေချင်ရင် မိဘတွေ၊ အိမ်မှာတူတူနေတဲ့ ဦးဦးတွေ တီတီတွေကပါ ဆင်ခြင်ဖို့ လိုပါတယ်။
လုံးဝ ဖုန်း၊ TV မသုံးတဲ့အချိန် ရှိပါစေ
မိသားစု ထမင်းစားချိန်၊ မိသားစု စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောချိန် ဖုန်းလုံးဝမသုံးဖို့ စည်းကမ်းချထားပါ။
တခါတလေ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုလုံးဝ မရသော နေရာတစ်ခုကို မိသားစု ခရီးထွက်ပါ။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာပါ။ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ မိသားစု အချိန်လေးကို ဖန်တီးပါ။ ခရီးထွက်ခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကFacebook မှာ ဓာတ်ပုံတင်ဖို့ မဖြစ်ပါစေနှင့်။
သားသမီး အတွက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ပေးပါ
၃ နှစ်ကျော် ကလေးတွေကို သုံးစွဲမည့်အချိန်၊ ပေးသုံးမည့် ကြာချိန် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထားပေးပါ။ ပေးသုံးမည့်app၊ ပေးသုံးမည့် website များကိုပါ မိဘကိုယ်တိုင် စီစစ်ရွေးချယ်ပေးပါရှင်။
ထမင်းစားချိန်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ကစားချိန်၊ မိဘနှင့် သားသမီး
စကားပြောချိန်ကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထားပေးပါရှင်။
အိပ်ရာဝင်ချိန် ဖုန်းမသုံးရ စည်းကမ်းကို ထုတ်ပါရှင်။ အိပ်ရာထဲသို့ ဖုန်း၊ iPad၊ computer၊ laptop များ ပေးယူခွင့်လုံးဝလုံးဝ မပြုပါနှင့်။ ဖုန်းတွေ အစား စိတ်အပန်းပြေစေနိုင်သော၊ အိပ်ပျော်အောင် အထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော သံစဉ်များနဲ့ အစားထိုးပေးပါနော်။
ဖုန်းကဘဝတစ်ခု မဖြစ်အောင် ကူညီပေးပါ
ဖုန်းထဲမှာပဲ အောင်မြင်တဲ့ သူဖြစ်မနေအောင်၊ အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာ ပိုနေတတ်အောင် ကူညီပေးရမှာ မိဘတွေတာဝန်ပါရှင်။
ဘောလုံးကို အပြင်မှာ ကန်ခိုင်းမလား၊ screen ပေါ်မှာပဲ ကန်ခိုင်းမလား???
ဒါမိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်သားသမီးအတွက် ရွေးချယ်မှု လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီတော့ ကိုယ့်သားသမီးဝါသနာပါတာကို အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်အောင် ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းဟာ ဖုန်းမစွဲအောင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အာရုံပြောင်းရာ ရောက်ပါတယ်ရှင်။
သွေးပေါင်ကျဆေးတွေ တကယ်လိုတာဟုတ်ရဲ့လား ..?
မတ်မတ်ဗိုက်တွေအတွက် သတိထားရမဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်..